कोरोनासँगको लडाइ घरमै बसेर ! | लगातार समाचार
Home विचार/ विश्लेषण कोरोनासँगको लडाइ घरमै बसेर !
कोरोनासँगको लडाइ घरमै बसेर !
९ चैत्र २०७६, आईतवार २१:२०
चीनको वुहान शहरमा गत बर्ष २०१९ डिसेम्बर ३१ तारिकका दिन कोरोना भाइरसको संक्रमण पहिलो पटक केहि ब्यक्तिमा देखा परेको थियो।
हाल सम्म ग्रीन जाेनकाे रूपमा रहेकाे नेपालमा बिरगंजका एक ब्यापारी जो भारतको पटनामा एक अस्पतालमा कोरोना संक्रमित भएको बिभिन्न संचार माध्यमले जानकारी गराएता पनि उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ।
नेपाललाई बिश्व स्वास्थ संस्थाले उच्च जोखिममा राखेको छ भने तुरुन्तै भारतसँगको सम्पुर्ण सिमा क्षेत्र बन्द गर्न सुझाब दिएकाे छ। हाल नेपाल सरकारले सम्पुर्ण अन्तरास्ट्रिय हवाई उडान करिव १० दिनकालागि बन्द गरेको छ। लामो दुरिका यातायात पनि पनि बन्द गर्दैछ। नेपाल हाल सेमि लकडाउनको अवस्थामा छ। बिश्वमा कोरोना भाईरसको माहामारि फैलदै गर्दा नेपाल सरकारले पनि सम्पुर्ण नेपालीहरुलाइ संक्रमणबाट बच्न र बचाउनका लागि बिभिन्न उपायहरु अवलम्बन गर्ने प्रयास गरिराखेको छ। देशका बिभिन्न स्थानमा अस्थायी आईसोलेसन वार्ड तयार गर्दै छ। भलै तयारी अझै गर्न जरुरी छ। केही ब्यक्तिहरु भने सरकारको यस प्रयासलाई मजाक बनाउदै सामाजिक संजालमा बिभिन्न अफवाह फैलाउँदै आनन्दीत महसुस गरिरहेका छन।
त्यस्तै अफवाहका त्रासबाट नेपालिहरू लौन महामारि नेपालमा पनि फैलिदैछ अब मरिने त होईन भनेर त्रसित छन्। नाकाबन्दि हुने त होइन भनि आत्तिएको अवस्था छ। रोग लागेर भन्दा झुठा हल्लाका कारण नेपाली ले ज्यान गुमाउलान भन्ने डर छ। सबैजना खाद्यवस्तु भण्डारण गर्न तर्फ हुलका हुल ब्यस्त छन। केही ब्यापारीहरु मौकाको फाईदा उठाउदै काला बजारि गर्न तल्लीन छन्। जहाँ सरकारले ध्यान पुराउन सकेको छैन। सरकारले २५ जना भन्दा बढि जम्मा नहुनु भनेर निर्देशन नै जारि गरेको छ। तर पनि कहि कतै सो निर्देशन पालना गरेको पाइदैन।
कहि कतै केही नेपालीलाई कोरोना भाईरसको संक्रमण पाइएको खण्डमा तपाई हाम्रो अवस्था के होला। एक जना नेपालीलाई भारतको पटनामा संक्रमण भेटियो भन्ने संचार माध्यमबाट आएको गलत खबरले पनि नेपालीलाई केही बेर निकै चिन्तित बनायो।
त्यसैले पनि समयमै सचेत रहदै कोरोना संक्रमणबाट बच्न र अरूलाई पनि बचाउन सरकारको निर्देशन पालना गरौं। घरमा नै बसौं। हरेक पटक साबुन पानीले हात धौहौं। कडा ज्वरो तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या आए तुरुन्त अस्पताल वा डाक्टरको सल्लाह लिऔं।
बिरगंजका एक नेपालीमा कोरोना भएको हल्ला कि पुष्टी ?
सीमा नाका एक हप्ता बन्द, ५० करोडको कोष स्थापना
सबै मृत्यु डाक्टरको कमजोरीले मात्र हुँदैनन्
१५ फाल्गुन २०७७, शनिबार ०८:३०
सम्झनामा बुबा र ‘जनयुद्ध’
२२ पुष २०७७, बुधबार १३:२२
१८ पुष २०७७, शनिबार ०७:५८
व्रत बसेरै ९० प्रतिशतसम्म निको हुन्छ कोभिड-१९
११ मंसिर २०७७, बिहीबार ०७:२७